फेसन डिजाइनमा भविष्य देख्नेहरुले यो पेशा अगाँल्न सक्छन् । – Nari Post
You are at :Home»कला / साहित्य»फेसन डिजाइनमा भविष्य देख्नेहरुले यो पेशा अगाँल्न सक्छन् ।
पछिल्लो क्रममा मानिसहरु आफुले लगाउने कपडामा निकै सजग हुन थालेका छन् । त्यसैले त अहिले आकर्षक कपडा, फेसन अनुसारको डिजाइनको लागि फेसन डिजाइनरहरुको खोजी हुने गरेको छ । पछिल्लो क्रममा राम्रो फेसन डिजाइनरको माग बढ्दो छ । फेसन डिजाइनमा आफ्नो भविष्य खोजेर आउनेको जमात पनि ठूलै छ । विशेषगरि महिलाहरु यो पेशातिर आकर्षित भईरहेका छन् । फेसन डिजाइनरहरु अहिले व्यवसायिकता तिर अघि बढिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा भविष्य कस्तो छ भनेर हामी एक जना व्यवसायिक रुपमा यो पेशा अगाँल्दै आउनुभएकी फेसन डिजाइनर सुष्मा थापा पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौ ।
१. यो क्षेत्रमा लाग्ने सोंच कसरी आयो ?
मलाई पहिलेदेखि नै डिजाइनको सोख थियो । जे पनि कुराहरु सिंगार्नु मेरो सोख हो । घरमा पनि घरहरु सिङ्गार्ने, गमलाहरु सजाउने, घरका अरु चिजहरु सजाउने गरिरहन्थेँ । पछि गएर कपडाहरुमा पनि विभिन्न बुट्टाहरु राखेर डिजाइन गर्ने गर्दा म यो क्षेत्रमा आए ।
२. कहिले प्रवेश गर्नुभयो ?
मैले २०६२ साल तिर यो पेशालाई अगाँलेको हो ।
३. कसरी सुरुवात गर्नुभयो ?
मैले सुरुवातमै ठूलो लगानी गरेर गुन्यूचोली बुटिक खोलेको हो । यसलाई अझै ठूलो बनाउने सोंच छ । अझै धेरै लगानी गरेर आफ्ना व्यवसायलाई ठूलो बनाउने सोंच छ ।
४. फेसन डिजाईनबारे कहाँ अध्ययन गर्नुभयो ?
अध्ययन गरेर म यो क्षेत्रमा लागेको होइन् । मैले १४ महिने कोर्ष मात्र गरेको हो । ए.आई.ई.सी.मा दिनको २ घण्टा क्लास हुन्थ्यो । अहिले त त्यसरी गरेर हुँदैन । धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । अध्ययन र अभ्यास दुवै गर्नुपर्छ । पछिल्लो क्रममा फेसन डिजाइनको दायरा फराकिलो हुदैँ गइरहेको छ । अहिले स्कुलको रुपमा विकास भइरहेको छ । स्कुलबाट ग्राजुएसन, मास्टर्ससम्म अध्ययन हुन्छ ।
५. खर्च कत्ति लाग्छ ?
त्यो समयमा मैले महिनाको ४ हजारको दरले सिक्थेँ । यति नै भन्न सक्दिन तर अहिले अलि महङ्गो भएको छ ।
६. करियर कस्तो छ ?
करियर राम्रो छ नि ! मैले अघि नै भनेँ नि ! फेसन डिजाइनको दायरा बढेको छ । अवसरहरु थुप्रै छ । मानिसहरुले फेसन के हो बुझ्न थालेका छन् । फेसनको महत्व बुझेका छन् । त्यसैले फेसन डिजाइनरहरुको माग बढ्दो छ । पछिल्लो क्रममा त झन् विभिन्न इभेन्ट र ब्यूटि पेजेन्टहरु दिनहुँ आयोजना भईरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि प्रतिष्पर्धा बढ्दो छ । जसले राम्रो गर्न सक्यो त्यो व्यक्ति अगाडि बढ्छ ।
७. संघर्षका कुराहरु ?
ओहो ! संघर्षको त कुरै नगरौँ । धेरै गाह्रो भयो । त्यो बेला यहाँ केही सामान पाउँथेन । सबै सामान बाहिरबाट ल्याउनुप¥यो, फेरि महँगो । फेरि काम गर्ने मान्छे पनि नपाउने । मानिस पोखरा महँगो छ भनेर आउनै नमान्ने, तराईबाट आएकाहरु प्राय काठमाण्डौँमा सजिलो हुन्छ भनेर त्यतै जाने । बल्ल पाएको कामदार बस्नै नमान्ने त्यतिबेला बजार सानो खासै आकर्षण थिएन । त्यसैले आफ्नो करियर भविष्यको लागि पलायन हुन्थे । नयाँ कामदार ल्यायो फेरि जिरो लेवलबाट सिकाएर गर्नुपर्ने साह्रै झन्झट थियो । फेरि कलिकति कटाई सिलाइ जान्ने मानिसले सानो कुर्था पसल वा टेलर राख्यो, कपडा सिलाएर सामान्य बुटिक राखेर बेच्ने पसलेले बाहिर बुटिक होम भनेर राख्ने अनि मानिसहरुले टेलरले सस्तोमा गरिदिन्छ तपाईहरुले किन महँगो भन्ने जस्ता गुनासो आउँथ्यो । मानिसहरुले टेलर र बुटिक होम नबुझिदिदा दुःख पाइयो । ग्राहकले नबुझिदिदा साधारण कामले गुजारा गर्नुपथ्र्यो । अहिले बझ्दै गएका छन् । त्यसैले सजिलो भएको छ ।
८. हाम्रो समाजले ग्ल्यामर दुनियालाई स्विकार्न अप्ठ्यारो मान्ने त्यो बेलामा तपाई यो पेशामा लाग्दा कुनै समस्या भएन ?
भएन, पहिलेको समय भएपनि मलाई परिवारको फुल्ली सपोर्ट थियो । विवाह भएर छोराछोरी हुर्काएपछि, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे पछि म यो क्षेत्रमा लागेकोले त्यस्तो कुनै रोकतोक भएन ।
८. यो क्षेत्रमा लाग्न चाहने जो कोहि महिलाले यो पेशा अपनाउन सक्छन ? आर्थिक हिसाबले ?
जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय, इच्छा हुनुप¥यो यो वा त्यो पेशा भन्ने त हुँदै हँुदैन । आर्थिक हिसाबले त्यति धेरै महँगो भएको छ जस्तो लाग्दैन । मैले धेरै पहिले यो पेशा सुरु गरेकोले त्यो बेलामा सस्तै थियो भन्नुपर्छ । अहिले म आफ्नो काममा धेरै बिजी हुन्छु । त्यसैले बजारमा चलेको रेट मैले बुझेको छैन । तर यो पेशा अपनाउन चाहनेहरुले अपनाउन सक्छन् ।
९. फेसन डिजाइनर बन्न लाग्ने प्रोसेसहरु ?
अहिले त धेरै छ । सानो क्लासबाट सुरु गरेर ग्राजुएसन मास्टर्ससम्म गर्नुपर्छ । धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
१०. पोखरामै बसेर अध्ययन सकिन्छ ?
यदि राम्रो डिजाइनर बन्ने हो भने पोखरामा बसेर अध्ययन गर्न सकिदैन । कम्पिटिसनको जमाना छ । जति बेष्ट गर्न सक्यो त्यहि बजारमा चल्छ । अहिले हामीले जसरी सिकेका थियौँ, त्यसरी सिकेर हुँदैन ।
११. फेसन डिजाइनरको पोखरामा स्कोप कस्तो छ ?
पोखरामा स्कोप राम्रो छ । फेसन र मोडलिङमा पोखराले पनि फड्को मार्दै गइरहेको छ । फेरि पछिल्लो क्रममा पोखरामा विभिन्न इभेन्ट, ब्यूटि पेजेन्ट र ठूला ठूला कार्यक्रम हुने क्रम बढ्दो छ । त्यसका लागि मानिसले आफ्नो पोशाकलाई महत्व दिन थालेका छन् । कपडा लगाउने मामलामा को भन्दा को कम हुन्छ । कस्को राम्रो ड्रेस, फेसन के चलेको छ, पछिल्लो क्रममा चलेको डिजाइनर को सबैले मुल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । फेरि अहिले अनलाइन बिजनेसको जमाना छ । कष्टमरहरुले प्राय अनलाइन सपिङ गर्छन् । गर्न सक्यो भने छ । फेसन डिजाइन ब्राइडलतिर गइरहेको छ ।